इटालीको दुखान्त कथा नेपालमा नदोहोरियोस् – श्वेतपत्र
मलाई कोरोनाको कुनै भय छैन, मलाई कोरोनाले छुँदैन भनेर निष्फिक्री हुनुहुन्छ भने मान्नुस् तपाईं जीवनकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ।
विश्वभरी महामारी बनेको कोरोना भाइरस (कोभीड १९) बाट चैत ११ गतेसम्म तीन लाख ९२ हजार २८६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमितमध्ये १७ जना १४७ जनाको मृत्यू भइसकेको छ ।
मृतकमध्ये ६ हजार ७७ जना इटालीका नागरिकमात्रै हुन् । इटालीमा चैत ११ गतेसम्म ६३ हजार ९२७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । इटालीमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या उद्गमस्थल चीनको भन्दा झण्डै दोब्बर बढी हो ।
इटालीका जनता कोरोनबाट आक्रान्त छन् । कोरोनाकै कारण इटालीको अर्थतन्त्र समेत संकटमा परेको छ ।
युरोपकै उच्चस्तरको स्वास्थ्य सेवा रहेको इटालीमा कसरी कोरोना फैलियो ? कसरी यस्तो भयावह स्थिती आइलाग्यो ? कसरी इटालीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो ? र, यति धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुु पर्यो ।
इटालियन सरकारले क्वारेन्टाइन (भाइरस फैलिएका ठाउँ) मा राखेका झण्डै १० हजार मानिस एकै रातमा आफुखुशी निस्किएर भाइरस नैफिलिएको ठाउँमा भएका आआफ्नो घरमा फर्किन्छन् । उनीहरुकै कारण इटालीमा कोरोना महामारी फैलिएको हो ।
नेपालमा दैनिक रुपमा इन्डियाबाट भित्रिएका हजारौं नेपाली क्वारेन्टाइनमा नबसी आआफ्नो घरतिर लागेका छन् । अरु मुलुकबाट पनि उत्तिकै नेपाली आइरहेका छन् । नेपालगञ्जको स्कुलमा क्वारेनटाइनमा राखिएका साढे ५ सय नेपाली भागेर घर फर्किएका छन् ।
इटालीमा सरकारले क्वारेनटाइनमा राखेका मान्छे भागेर घर फर्किंदा कोरोना महामारी फैलिएको थियो । नेपालमा त कोरोना महामारी फैलिएका मुलुकबाट आएका नागरिकलाई पनि क्वारेनटाइनमा नराखी घरमा पठाइएको छ । फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल फर्किएकी १९ वर्षिय एक युवतीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भइसकेको थियो । उनी आएको कतार एयरमा २०५ जना सवार थिए ।
अब परिणम कस्तो आउला ?
‘मलाई कोरोनाको कुनै भय छैन, मलाई कोरोनाले छुँदैन ।’ यदि तपाई यस्तो मनस्थिति बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईं अत्यन्त ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ ।
तपाईं कोरोना भाइरसको घातकताबाट अहिले पनि निष्फिक्री हुनुहुन्छ भने मान्नुस् तपाई जीवनकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईंको जीवनलाई मात्रै होइन अन्य धेरै जनाको जीवनलाई खतराको मुहानसम्म पुर्याउन सक्छ ।
यदि तपाई अहिले पनि निष्फिक्री साथ आफ्ना मित्रहरूसँग होटल रेस्टुराँ गइराख्नु भएको छ, पार्टी गरिराख्नु भएको छ। र, दम्भपूर्वक भनिराख्नु भएको छ, ‘मलाई कोरोनाको कुनै भय छैन, मलाई कोरोनाले छुँदैन।’ यदि तपाई यस्तो मनस्थिति बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईं अत्यन्त ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ। यसले तपाईंलाई मात्र होइन सम्पूर्ण समाज र देशलाई नै ठूलो जोखिममा र्पुयाउन सक्छ। तसर्थ, सतर्क हुनुस्।
इटालीकै एकजना नागरिकले आफ्नो देशमा कसरी कोरोना फैलियो र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भनेर आफ्नो अनुुभव शेयर गरेका छन् । उनको सन्देश अत्यन्तै मार्मिक र कारुणिक छ ।
कोरोना कथा भाग १
सारा विश्वलाई नै थाहा भइसकेको छ कि, अहिले कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिँदा सिंगो इटाली क्वारेन्टाइनमा छ । अर्थात् पुरै इटाली देश नै ‘लकडाउन’ छ । त्यो भनेको बाहिर निस्किने अतिआवश्यक काम नभएसम्म देशका सबै नागरिक घरमै बस्नुपर्छ । इटालीको अवस्था अति नै गम्भीर बनेको छ । इटालीको अवस्था त गम्भीर र नराम्रो भई नै सक्यो, तर, दुःखका साथ भन्नु परिरहेको छ, आउने समयमा बाँकी मुलुकहरुको अवस्था यो भन्दा पनि नराम्रो हुनसक्छ ।
जसले अहिले सोचिरहेका छन्, हाम्रो देशमा चीन, इरान, इटाली र इटालीको जस्तो अवस्था आउँदैन । हामीलाई थाहा तपाइहरु के सोँचिरहनुभएको छ, किनकी हामी इटालियनहरुले पनि पहिला यही सोँचेका थियौं ।
एकछिन हेरौं, हाम्रो इटालीमा २/३ हप्तामा कसरी कोरोनाको महामारीबाट गुुज्रिनुपर्यो ।
तपाइलाई थाहा छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । तपाइको देशमा पनि यस संक्रमणले प्रवेश गरिसकेको छ । तपाइहरु न्युजमा पढिरहनु भएको छ, टिभी र इन्टनरेनमा समचार हेर्नुभएको छ । तपाईंको देशमा पहिलो, दोस्रो गरेर केही पोजेटिभ केसहरु देखिएका छन् । भर्खर मात्र सुरु भएकोले यसबाट त्यति साह्रो आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो संक्रमण भनेको एक प्रकारको रुघाखोकी र ज्वरो हो । यसले वृद्धवृद्धालाई बढी प्रभावित पार्छ ।
म बुढो मान्छे होइन । म सुरक्षित छु, ढुक्क छु।
फस्ट स्टेज अघि बढ्छ, तपाइलाई लाग्छ, किन प्रत्येक मानिस मास्क, ट्वाइलेट पेपर र स्यानिटाइजरका लागि पागल भइरहेका छन् । त्यस्तो केही खतरा छैन । सबै कुरा ठिकठाक नै चलिरहेको छ । र, चलिरहन्छ । अनि, स्थिती योभन्दा अघि बढ्छ ।
ऋब विस्तारै देशमा पोजेटिभ केशहरु बढ्दै जान्छन् । सरकारले एक दुईवटा सहरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्छ, रेड जोनमा आवतजावत गर्न निषेध गरिन्छ । सुरुमा केही केश देखिएका शहरहरुमा विरामी बढ्दै जान्छन् । सरकारले जनतालाई सूचित गरिरहेको हुन्छ, डराउनुपर्दैन स्थिति नियन्त्रणमै छ । त्यहीका डाक्टर, नर्स र अस्पतालहरुले बिरामी हेर्छन । २२ फेबुअरीसम्म इटालीको स्थिति यस्तै थियो ।
दोस्रो चरणले गति लिन्छ, कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेको देशमा केही मानिसको मृत्यु हुन्छ। मर्नेहरू प्रायः बुढाबुढी र दीर्घरोगी हुन्छन् । सबै खाले मिडियाले यससम्बन्धि समाचार प्रसारण गर्छन् । मिडियाको समाचारबाट हामी सचेत हुनुको सट्टा उल्टै समाजमा त्रास फैलाएको निष्कर्ष निकाल्छौं, हाम्रो धारणा हुन्छ मिडियाको यो कृत्य राम्रो काम होइन, मिडियाले ‘पेनिक’ फिँजाउने काम गरिरहेको छन् ।
यति बेलासम्म हामीले आफ्नो दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैनौं । पहिलाजस्तै अझै पनि साथीभाइसँग भेटघाट गरिरहेका हुन्छौं । सामान्य हिसाबमै जीवनयापन गरिरहन्छौं । हामी इटालियनहरुको धारणा थियो, हामीलाई केही पनि नराम्रो हुँदैन । विपत्ति हाम्रो झनझन नजिक आउँदै गइरहेको थियो, हामीले यसको पूर्वाभास गर्न सकेनौं ।
म आफ्नो काम गरिरहन्छु, व्यापार व्यवसाय गरिरहन्छु, साथीभाइ भेटिरहन्छु, मलाई यो भाइरसको कुनै डर पनि छैन । यहाँ सबै ठिकठाक छन् ।
विस्तारै देशमा संक्रमित भएकाहरूको संख्या छिटोछिटो बढ्दैछन् । एकै दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर पुग्छ, मृत्यु संख्या पनि बढ्छ । स्थितिको मूल्यांकन गरेर सरकारले ती चारवटा ठूला क्षेत्रलाई प्रतिबन्धित गरेको घोषणा गर्छ जुन क्षेत्रमा संक्रमणको सबैभन्दा बढी प्रभाव देखिएको थियो । ७ मार्चका दिन इटालीमा यस्तै भएको थियो, इटालीका एक चौथाई (२५ प्रतिशत) मानिसलाई घरमै बन्धक बनाइयो । अर्थात् मान्छे क्वारेनटाइन बस्न थाले ।
कोरोना कथा भाग २
रेड जोन तेकिएका भागका स्कूल, कलेज बन्द गरिन्छ । तर, कार्यालय, फिल्म हल, रेष्टुराँ भने अझै खुलेकै हुन्छन् । मिडियाले सरकारी नियम निर्देशनलाई पहिला देखि नै प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका थिए।
तेस्रो चरण अगाडि बढ्छ, इटालियन सरकारले क्वारेन्टाइन (भाइरस फैलिएका ठाउँ) मा राखेका झण्डै १० हजार मानिस एकै रातमा आफुखुशी निस्किएर भाइरस नैफिलिएको ठाउँमा भएका आफ्नो घरमा फर्किन्छन् । अझै पनि इटालीका झण्डै ७५ प्रतिशत मानिस आफ्नो दैनिक कामकाजमा व्यस्त भइरहेका हुन्छन् । उनीहरुको दैनिकी खासै बदलिएको हुँदैन ।
तेस्रो चरण वेगका साथ अगाडि बढ्छ, इटालीका जनताले अझैसम्म यस भाइरसको विभिषिकाबारे बुझ्न सकेका छैनन् । सरकार तथा मिडियाले इटालीका नागरिकलाई स्वस्थ रहन, पटकपटक हात धुन, मास्क लगाएर हिँड्न सम्झाइरहेका हुन्छन् । मान्छेलाई भेला समारोहमा नजान, सकेसम्म घरमै बस्न परामर्श पनि दिइरहेका हुन्छन् । तर सरकार र मिडियाले जति प्रयास गरे पनि इटालियनको मस्तिष्कमा यी कुराले छुँदैन । इटालियनहरुको लापरवाहीले कोरोनारुपी दानवले यतिम्म अवस्था बिगार्नसक्छ भनेर अनुमान लगाउन सकेका छैन् ।
पोजिटिभ केशहरु ह्वात्तै बढ्न लागेका छन् । सबै स्कुल कलेजहरु कम्तीमा एक महिनाका लागि बन्द भएका छन् । देशमा स्वास्थ्यको इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको छ । अस्पतालहरुमा विरामी भर्ना गर्न ठाउँ नपुगेपछी अन्य सामान्य बिरामीहरुलाई हटाएर खाली गर्न लागिएको छ, रेगुलर अप्रेसनहरु क्यान्सिल गरिएका छन् ।
डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको चाप धान्न सकेको छैन । रिटायर्ड भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारमा सहयोग गर्न बोलाइएको छ । डाक्टरी अन्तिम वर्ष पढ्दै गरेकाहरुलाई काममा खटाइको छ । स्वयमसेवकहरु भर्ना गरिएका छन् । सिफ्टमा काम गर्ने भन्ने नै छैन, जती काम गर्न सकिन्छ गर्नु भनिएको छ ।
डाक्टर नर्सहरुलाई पनि भाईरस संक्रमण देखिएको छ, उनीहरुको परिवार, बच्चाबच्चीलाई पनि देखिएको छ । भाईरस संक्रमण जटिल भएर निमोनिया भएका बिरामीहरु थुप्रिन थालेका छन् । आइसीयु चाहिने विरामीहरुको भिड बढ्न थालेको छ, तर विडम्बना आइसीयु बेड खाली नै छैन ।
अझ भर्ना गर्नलाई सामान्य बेडहरु पनि खाली छैन । भर्ना गरेपनि हेर्नलाई पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।
यो एउटा युद्दक्षेत्र जस्तै भएको छ ।
डाक्टरहरुले आउनेजति सबैलाई उपचार गर्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । उपचारपछि बाँच्ने सम्भावना जसको बढी छ, उसलाई बेड दिनुपर्ने, औषधी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसले गर्दा बुढाबुढीहरुले उपचार पाउने सम्भावना घट्दो छ ।
थोरै जनशक्ती र स्रोतले सबैलाई धान्नै नसकिने देखिएको छ । भेन्टिलेटर चाहिने सिकिस्त विरामीलाई अक्सिजन मात्र लगाएर राख्नुपर्दा मर्नेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो तरिकाले आँखैअघि बाँच्न सक्ने र बाँच्नु पर्ने बिरामीहरु मरेको देख्दा डाक्टर, नर्स विक्षिप्त छन् । तर गर्न सकिने केही छैन, पूरा सिस्टम धरासायी हुँदैछ ।
कोरोना कथा भाग ३
चौथो चरण द्रुत गतिले अगाडि बढ्छ । इटालीमा सयौं मानिस मरिरहेका छन्, किनकि देशका अस्पताल र अस्पतालका ‘आइसियु’ हाउसफुल छन् । बिरामीलाई उपचार गर्ने ठाँउ छैन । मेरा एकजना डाक्टर मित्रले मसँग फोनमा भने, ‘आइसियु’ खाली नभएकाले तीनजना बिरामीलाई उपचार गर्नुको सट्टा मर्न छाडिदिनुपर्ने बाध्यता झेल्नु पर्यो मैले ।
अस्पतालका नर्सहरु रोगीका लागि अक्सिजन दिनेबाहेक अरु कुनै उपचार गर्न नसकेकाले रोइरहेका छन्।’ मेरो एकजना साथीको आफन्त उपचार नपाएकाले मरे।
रेड जोनबाट भागेर घर पुगेका १० हजार जनाबारे अघि भनिसकेँ । सम्झिनुस् ती मुर्खहरुलाई, जसलाई सरकारले सुरुवातमै ‘क्वारेन्टाइन’मा राखेको थियो । तिनीहरु ‘क्वारेन्टाइन’ बाट भागेर घर गए, तिनै भगौडाहरुले गर्दा ९ मार्चका दिन सम्पूर्ण इटाली नै ‘क्वारेन्टाइन’ बन्न पुग्यो ।
अब इटाली सरकारको एक मात्र उद्देश्य यस संक्रमणलाई अरु धेरै फैलिन नदिन केन्द्रीत छ । मानिसलाई अवस्था हेरी काममा जान दिइएको छ । जरुरी सामान किन्न दिइएको छ, व्यापार खोलिएको छ । यसो नगरे पूरै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन पुग्छ । तर अझै पनि तपाई आफ्नो ठाउँबाट बिनाकारण बाहिर जान पाउनुहुन्न ।
तर मानिसको बुद्धि विवेक ! केही मानिसलाई अझै पनि लाग्छ, उनीहरुलाई केही पनि हुन्न । उनीहरु अझै पनि साथीसँग बाहिर घुमिरहेका छन् । समूहमा हिंडिरहेका छन् । रक्सी खाएर रमाइरहेका छन्।
दुई दिन पहिला सरकारले सबै व्यापारिक प्रतिष्ठान, सपिङ मल, रेष्टुरेण्ट तथा सबै पसल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । अब सुपरमार्केट र औषधि पसल मात्र खुला रहने घोषणा गरिएको छ।
अब तपाईं आफ्नो स्थानबाट त्यस अवस्थामा मात्र बाहिर जान सक्नुहुन्छ जब तपाइसँग बाहिर जानका लागि उचित कारण हुन्छ । यसका लागि तपाइले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यस अनुमतिपत्रमा तपाईंको नाम, ठेगाना लगायत सम्पूर्ण जानकारी लेखिएको हुन्छ । ठाउँ ठाउँमा प्रहरीको ‘चेकिङ प्वान्ट’ बनाइएका छन् । घरबाहिर निस्कने जुनसुकै मानिसलाइ त्यहाँ सोधपुछ गरिन्छ ।
अहिले इटालीमा घरबाहिर कोही मानिस पक्राउ परेको खण्डमा उसलाई २ सय ६ युरोको जरिवाना लगाइन्छ । र, यदि ऊ कोरोना संक्रमित छ भने एक वर्षदेखि १२ वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ ।
यो १२ मार्चसम्मको अवस्था हो । इटालीलाई यो अवस्थामा पुग्न दुई साता मात्र लाग्यो । इटालीलाई यो अवस्थासम्म आउन पाँच दिन मात्र लाग्यो ।
विश्वका अरु देशहरु बिस्तारै यस चरणमा प्रवेश गर्दैछन्, जहाँबाट हामी गुज्रिसकेका छौं । म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, तपाइहरु अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न, स्थिति कतिसम्म भयावह हुन सक्छ ? दुई साताअघिसम्म हामी पनि तपाइले सोचेजस्तै सोचिरहेका थियौं, कि हामीलाई केही हुँदैन ।
यो भाइरस खतरनाक भएका कारण यस्तो भयावह परिस्थिति उत्पन्न भएको होइन, बरू यस भाइरसको सामना गर्न हामी सक्षम नभएकाले स्थिति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो ।
मेरो तपाई सबैलाई अनुरोध छ, आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुस् । यस्तो भ्रम नपाल्नुस् कि मलाई केही हुँदैन । सक्नुहुन्छ भने आफ्नो घरभित्रै क्वारेन्टाइन बस्नुस् । केही देशले हामीलाई केही हुँदैन भन्ने सोचेको देख्दा दुःख लाग्छ । उनीहरुले यसको बचाउमा केही ठोस कदम चालेका पनि छैनन् । समय रहँदै उनीहरुले यस महामारीबाट बच्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
इटाली सरकारले अब आएर कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालेको छ । सरकारले यस भाइरसलाई, ‘यो जहाँ छ त्यहीं रोक्नुपर्छ भन्ने’ दृढ मानसिकता राखेर राम्रो काम गरिरहेको छ । यसका लागि उसले ढिलै भएपनि कठोर र सकारात्मक पाइला उठाएको छ ।
चीनले पनि यसैगरि नै कोरोना संक्रमणमाथि विजय पाएको हो । चीनले सबै क्षेत्र बन्द गरेर, मानिसहरूलाई घरमा थुनेर भाइरस संक्रमणमाथि सफलता हासिल गर्यो । इटाली सरकारले जनतालाई बैंकको किस्ता तथा व्यापारमा मद्दत गरेर सहयोग गरिरहेको छ ।
तर, मलाई भने यस चिन्ताले सताएको छ यदि सबै देशको अवस्था यस्तै भयो भने विश्वको स्थिति कस्तो होला?
यदि तपाईं रहेको स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति छन् भने तपाईं इटालीको अवस्थाभन्दा दुई साता मात्रै पछाडि हुनुहुन्छ । तपाईं इटालीले भोगेको दुरावस्था विस्तारै बुझ्नुहुन्छ । तसर्थ मेरो तपाई सबैलाई अनुरोध छ, आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुस् ।
यस्तो भ्रम नपाल्नुस् कि मलाई केही हुँदैन ।
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १९:४८ मा प्रकाशित
Related Topics:ItalyItaly CoronaItaly Covid-19इटालीकोरोना